उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल मौन - Mitho Khabar
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल मौन
April 1, 2020 mithokhabarLeaveaComment on उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल मौन
काठमाडौं, १८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि चासो देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘खरिद प्रकरणमा देखिएको विवाद के हो ? संकटका बेला किन यस्ता विषय विवादमा आए ? काम गर्ने तौरतरिका कहाँ मिलेन वा भएको के हो ? ’
उनको प्रश्न थियो– ‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? अहिलेसम्म भएको के छ ? बाहिर कमिसनका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको सन्देश किन गइरहेको छ ? ओलीसँगको भेटको अघिल्लो दिन १३ चैतमा दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दै पार्टीका तर्फबाट पत्र पठाएका थिए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
१२ करोड ४० लाखको भन्सार छुट लिने बिएन्डसी अस्पतालले झाडा पखाला लागेका बालकलाई गेटबाट फर्काइदियो